Kooxda uu madaxweynaha Waqooyiga Korea ee Kim Jong-un ka taageero horyaalka Premier League oo daaha laga rogay – Gool FM
Kooxda uu madaxweynaha Waqooyiga Korea ee Kim Jong-un ka taageero horyaalka Premier League oo daaha laga rogay
Ahmed Nur March 2, 2022
(England) 02 Maarso 2022. Hoggaamiyaha kaligii taliska ah ee dalka Waqooyiga Korea, Kim Jong-un ayaa la ogaaday kooxda uu ka taageero horyaalka Premier League inay tahay naadiga Manchester United.
Sidaas waxaa laga soo xigtay Antonio Razzi oo xubin ka ahaa baarlamaanka Taliyaaniga, waxaana uu sheegay inuu Kim si gaar ah ugu sheegay inuu taageere weyn u yahay kooxda Red Devils.
Razzi oo la hadlay wargeyska The Sun ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa sheegay in kaligii taliyaha Waqooyiga Korea uusan qarsan jaceylka uu u qabo kooxda Old Trafford ku ciyaarta iyadoo sanadkii 2014 sida la wariyay inuu muuqaal-baahiyeyaasha gudaha ku amray inay sii daayaan ciyaaraha kooxda reer England.
Si kastaba ha ahaatee, Hoggaamiye Kim ayaanan naftiisa la barbar dhigin xiddigaha Man United, kuwii hore ama kuwa haatan sida Zlatan Ibrahimovic ama Eric Cantona, mar uu Razzi ka hadlay arrintaanna waxa uu ku jawaabay inuu Kim yahay kaliya Kim, isaga oo qurana uu jiro.
Xiddig ka tirsan kooxda Chelsea oo aad ugu dhow Barcelona
"Waxa uu Abramovich iisoo bandhigay inaan ka iibsado Chelsea" - Hansjorg Wyss